SME မူ၀ါဒ မျှော်မှန်းချက်
၁။ နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ အဓိကအသက်သွေးကြောဖြစ်သော SMEs များအား ကူညီထောက်ပံ့အားပေးခြင်းများ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသည့် အောင်မြင်သော အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် နှင့် အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းများမှ အကြီးစားလုပ်ငန်းများသို့ ကူးပြောင်းချဲ့ထွင် လာနိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ကူညီအားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ်ရေရှည် စီးပွားရေးကို ခိုင်မာစေရန်ရည်ရွယ်၍ (၂၉.၃.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၂)၏ခွင့်ပြုချက်အရ (၄.၄.၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စက်မှုဇုန် ဖွံ့ဖြိုးရေး/နည်းပညာတိုးတက်ရေးဌာန၊ ပြည်ပဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ရေး ဌာနဟူ၍ ဌာန(၃)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနကို (၁.၄.၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး မူဝါဒနှင့်ပြည်ပရေးရာဌာန၊ နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာနနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးဌာနဟူ၍ ဌာန(၃) ခုဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၃။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒကို (၂၄. ၁၂. ၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို (၉.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး နည်းဥပဒေကို(၁၃. ၁၀ ၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် လည်းကောင်း ပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။
၄။ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို (၇. ၆. ၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို (၂၉. ၁၁. ၂၀၁၇)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအေဂျင်စီတို့ကို (၂.၁.၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ဖွဲ့စည်း၍ အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
© 2018 All rights reserved. A&Z Tech Solutions